'एएनएमएफ'को सहयोगमा कोशी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुने
२०७६ फाल्गुण १२ सोमबार १८:५९:०० प्रकाशित
काठमाडौं - विरागटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुने भएको छ। अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा कोशी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुन लागेको हो।
आगामी ६ महिना भित्र अक्सिजन प्लान्ट प्रयोग हुने गरी काम भइरहेको अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष डा भूपेन्द्र बस्नेतले बताए। उनका अनुसार प्लान्ट निर्माणका लागि अस्पताल र फाउन्डेसनबीच सम्झौता भइसकेको छ।
अस्पतालमा पाँच सय लिटर प्रति घण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुन लागेको हो।
दैनिक एक सय सिलिण्डर बराबर पाँच सय लिटर प्रति घण्टा हुने डा. बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार एक लाख एक हजार डलर (करिब एक करोड १५ लाख रुपैयाँ) मा उक्त अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुन लागेको हो।
प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने उद्देश्य सहित फाउण्डेशनले कोशी अस्पतालमा सहयोग गरेको हो। अमेरिकामा रही नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न इच्छुक वर्गको साझा संस्था हो, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन (एएनएमएफ)।
डा बस्नेतले भने, ‘प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने फाउण्डेशनको उद्देश्य छ। अहिले कोशी अञ्चल अस्पतालमा सम्झौता भइसक्यो। अन्य अस्पतालसंग पनि छलफल हुँदैछ।’
अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएपछि बिरामीलाई सेवा दिन सहज हुने अस्पतालले जनाएको छ। हाल अक्सिजन खरिद गर्नुपर्ने भएकाले बिरामी र अस्पताल दुवैलाई झन्झट हुने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी विष्णु बहादुर बुढाथोकीले बताए।
अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएपछि अस्पतालमा उपचारका अन्य कामसहित भेन्टिलर प्रयोग गर्न निकै सहज हुने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले भेन्टिलेटर चलाउन निकै मुश्किल छ। अक्सिजन प्लान्ट बनेपछि विशेषगरी भेन्टिलेटर चलाउन सहज हुन्छ।’
योसंगै आईसीयु कक्ष थप विस्तार गर्ने योजना रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले अक्सिजन सिलिण्डर खरिदका लागि वार्षिक १० लाख बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। अक्सिजन प्लान्टले वर्षेनी खर्च हुने लाखौं रकम पनि जोगिने उनले बताए। यस वर्ष अक्सिजन सिलिण्डरको माग बढेको उनले जानकारी दिए।
अस्पतालमा गत वर्ष ६ हजार १ सय ९६ सानो सिलिण्डर र १ सय ५ सय ठुलो सिलिण्डर गरी ७ हजार ६ सय ९६ सिलिण्डर खपत भएको थियो। ३ सय ५० शैय्या क्षमता रहेको अस्पतालमा दैनिक १५ सय बढी बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेको अधिकारीले जानकारी दिए।
नेपालको सात वटै प्रदेशका अस्पतालमा एक/एक वटा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुसार कोशीमा काम सुरु भएको एएनएमएफका अध्यक्ष डा सन्तोष सापकोटाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चार वर्षअघि नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पको समयमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजनको समस्या परेको थियो। अस्पतालमा अक्सिजनको समस्या आएपछि एएनएमएफले प्लान्ट निर्माणमा सहयोग गरेको हो।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्र नभई अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था नेपालका बाँकि ६ प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा गर्नुपर्छ भनेर सहयोग अभियान चलाइएको एएनएमएफका अध्यक्ष डा सन्तोष सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने काममा अमेरिकादेखि नेपालबाट समेत सहयोग जुटिरहेको छ।
यसअघि २०७५ मंसिरमा एएनएमएफले करिब ९७ लाखको लागतमा माहाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
सन् १९९७ मा नर्थ अमेरिका रहेका नेपाली डाक्टरहरु र नेपाललाई माया गर्ने समाजसेवीहरुको पहलमा यो संस्था स्थापना भएको हो। यो संस्था न्युयोर्कमा दर्ता भएको छ। पछि सन् २००० मा अमेरिका नेपाल चिकित्सक प्रतिष्ठान एएनएमएफ–नेपालको स्थापना पनि भयो। हाल यसको अध्यक्षमा वीर अस्पतालमा कार्यरत पेट रोग विशेषज्ञ डा भुपेन्द्र बस्नेत छन्।
भूकम्पमा यस संस्थाले १४ वटा हेल्थ पोस्टहरुको निर्माण, स्वास्थ्य उपचारसँगै विभिन्न राहत समाग्री पनि पिडितहरुलाई वितरण गरेको थियो। आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सर्जिकल सामानहरुका साथै संस्थाले स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणमा समेत सहयोग गरेको थियो।
२. प्युठानका एम्बुलेन्स चालकलाई पिपिई वितरण
९. मुम्बई किन बन्यो कोरोना हटस्पट